ကိုယျစားလှယျမြား၏သတငျး – Page2– Yangon Hluttaw
Home / ကိုယျစားလှယျမြား၏သတငျး (page 2)
May 29, 2017	ကိုယျစားလှယျမြား, ကိုယျစားလှယျမြား၏သတငျး, တာဝန်နှင့်ရပိုင်ခွင့်များ, ပွညျသူ့လှတျတျော, လဈလပျနရောမြား, အမြိုးသားလှတျတျော, ဆောင်ရွက်ချက်များ 0
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား- ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာဖြင့် တက်ရောက်လာကြတာ တွေ့ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါကြောင်းနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး ပြည်သူ့အကျိုး၊ နိုင်ငံ့အကျိုးကို ဆက်လက် သယ်ပိုးနိုင်ကြပါစေကြောင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ ရတဲ့
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနိုင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Paul R. Seger အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
May 29, 2017	ကိုယျစားလှယျမြား, ကိုယျစားလှယျမြား၏သတငျး, ကျောမတီ/ကျောမရှငျမြား၏ သတငျးမြားး, တာဝန်နှင့်ရပိုင်ခွင့်များ, လဈလပျနရောမြား, ဆောင်ရွက်ချက်များ 0
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနိုင်သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Paul R. Seger အား ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် အမှတ် (I-7) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ဆွစ်ဇာလန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပိုမိုတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ တိုးတက်မြင့်မားလာရေး တို့အတွက်
May 29, 2017	ကိုယျစားလှယျမြား, ကိုယျစားလှယျမြား၏သတငျး, ကျောမတီ/ကျောမရှငျမြား၏ သတငျးမြားး, ကျောမတီ/အဖှဲ့ / အသငျး, ကွငွောခကျြမြား, ခရီးစဉျမြား, ဆောငျရှကျခကျြမြား, တာဝန်နှင့်ရပိုင်ခွင့်များ, တာဝနျနှငျ့လုပျပိုငျခှငျ့မြား, မိန့်ခွန်းများ, ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောသတငျးမြား, လကျခံတှဆေုံ့မှုမြား, လဈလပျနရောမြား, အစညျးအဝေးမှတျတမျး, ဆောင်ရွက်ချက်များ 143
ပွညျသူ့လှတျတျော၊ ကျောမတီဥက်ကဋ်ဌမြားနှငျ့ ဥရောပပါလီမနျ၊ အရှတေ့ောငျအာရှနှငျ့ အာဆီယံ ဆကျဆံရေးဆိုငျရာကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
May 29, 2017	ကိုယျစားလှယျမြား, ကိုယျစားလှယျမြား၏သတငျး, ကျောမတီ/ကျောမရှငျမြား၏ သတငျးမြားး, ကျောမတီ/အဖှဲ့ / အသငျး, ကွငွောခကျြမြား, ဆောငျရှကျခကျြမြား, တာဝန်နှင့်ရပိုင်ခွင့်များ, တာဝနျနှငျ့လုပျပိုငျခှငျ့မြား, လဈလပျနရောမြား, ဆောင်ရွက်ချက်များ 30
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစော၊ ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်လင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဝင်းတို့သည် ဥရောပပါလီမန်၊ စီးပွားရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ